Ukusetyenziswa kunye neengxaki ezikhoyo zeglasi engacimiyo umlilo kubunjineli bokwakha / 2
1. uhlobo noqheliselo lokwahlula iglasi engacimi mlilo Ngokwe-GB / T12513-2006 "Indlela yovavanyo lomlilo yeeGlasi ezifakwe kwiglasi", isahlulelo seglasi esingqina umlilo sikwahlulwe saba sistim sokugquma ubushushu kunye nohlobo lokugquma olungashushu ngokwendlela yokumelana nomlilo , ngokwe-publ ...
Ukusetyenziswa kunye neengxaki ezikhoyo zeglasi engacimiyo umlilo kubunjineli bokwakha / 1
Ngokukhula ngokukhawuleza koqoqosho, izakhiwo, ngakumbi izakhiwo zorhwebo, ziyilelwe ukuba zibe nkulu kwaye zibe nkulu. Kwisixeko ahlala kuso umbhali, kwakhiwa izakhiwo ezi-5 ezinkulu ezineemitha zesikwere ezingaphezu kwama-300,000 kungaphelanga unyaka. Uyilo lothintelo lomlilo lwezakhiwo ezikhulu kangaka ...
Amasango kunye namashishini eWindows aza kusebenzisa umgangatho wemveliso ukuphumelela imarike
Okwangoku, abathengi bayayithemba i-brand nzulu, xa bethenga iingcango kunye neemveliso zeWindows kunokuba yinto engacacanga kwiimveliso zebranti enkulu, kwaye ingxaki iya kuhlala isenzeka ngokungazi. Kodwa xa kuthelekiswa nomnyango kunye nefestile uphawu, ukuze ufumane ukuthembela kwabathengi, kubaluleke kakhulu ...
Zeziphi iimpawu zeglasi eziglasi okonga umbane?
Iimpawu iglasi screen ezibuhlazarha 1, ubushushu yokugquma 1) Ulenze ubushushu usambathisa: Ulenze iglasi okonga umbane isebenzisa eyona isakhiwo A + 12 + A, kunye isithuba isithuba. Idatha yovavanyo ibonisa ukuba xa umsantsa weglasi engenanto iphakathi yi-12mm, isiphumo sokugcina amandla esibanzi ...
Kutheni le nto ukuvela kuvela emva kokuba iglasi emgongxo idityanisiwe?
Ngokubaluleka kokonga umbane kwizakhiwo zase China, iiglasi zokwambathisa imveliso njengeyonga umbane zixhaphake ngakumbi kwisicelo sokwakha iingcango, iifestile kunye neendonga zekhethini. Ngenxa yomda wobugcisa ophantsi wokukhusela imveliso yeglasi kunye nethemba elibanzi lemarike, ...
Ukuvuselelwa kwezakhono kunye nokukhula okuluhlaza kuya kunceda amashishini kunye neewindows ukugcina isabelo sentengiso
Kwiminyaka yakutshanje, njengokuba uqoqosho lwasekhaya lungena kweli xesha litshintshayo, ishishini lokungena kunye neefestile liyenyuka, kunye ne "crossover" kunye "notshintsho" ngamagama aphambili kwintengiso. Ngobuso babavelisi abaninzi kunye negalelo elisebenzayo le-layman, ukhuphiswano luyinxalenye ...
Isakhiwo esenziwe ngeglasi yamandla asezantsi sinokufumana njani ubomi obutsha?
Uyilo lweglasi luye lwaneengxaki ezininzi ukusukela oko lwayilwa. Eyokuqala kukuba umgangatho weglasi awuthembekanga, amandla akakho ngokwaneleyo. Kwaye iglasi eyaphukileyo iya kuvelisa iziqwenga ezibukhali, kulula ukwenza umonakalo; Okwesibini sisiphumo sokugcina kweglasi, esiya kuthi si ...
Ipateni yentengiso itshintshe iingcango kwaye ishishini leWindows kufuneka liziqhelanise notshintsho kunye nokuphuculwa kweThe Times
Ngophuhliso oluqhubekayo lweThe Times, ipatheni yokubonelela ngemarike yekhaya iye yatshintsha umhlaba. Kwimeko yokuhlaziywa kwecala lokubonelela, ukulungiswa kwengqondo, ukuphuculwa kokusetyenziswa, umnyango kunye nefestile kwishishini nayo ijongene notshintsho kunye nokuphuculwa. Indlela yokukhetha ikamva labo ...
Umzi mveliso weglasi kufuneka uhlale kude "nemfazwe yamaxabiso" ngomgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphezulu njengemilinganiselo
Kwiminyaka yakutshanje, "isiphelo esisezantsi simahla kubo bonke, isiphelo esilahlekileyo" sibeyimeko ehlazisayo kumashishini amaninzi kwicandelo lemveliso lase China. "Imfazwe yamaxabiso" kukusetyenziswa kwendlela eqhelekileyo yokhuphiswano, imboni yeglasi ayiqhelekanga. Oku kuthetha ukuba kunokuzisa b ...
Amasango kunye namashishini eWindows ukuvula imarike ezintsha kufuneka ziqwalasele indleko zesahlulo sentengiso
Okwangoku, ukukhula komzi mveliso kunye nefestile sele kukhulile, kwaye uphuhliso lweshishini lomnyango kunye nefestile liwele kwixesha elifutshane. Umnyango kunye nefestile angayifumana njani imingeni ethile kwicandelo lophuhliso olutsha, kwaye kufuneka aqinise ...
Nangona ithemba lentengiso leengcango ezenziwe ngokwezifiso kunye neWindows lilungile, amashishini kufuneka angene ngakwibhotile yophuhliso
Kule mihla, inguqu yamashishini eminyango nakwifestile ayisiyongxaki nje kuphela, kodwa ikwalithuba lokunyusa ukukhula kwamashishini eminyango nakwifestile kunye nokwandiswa kwemarike yabathengisi. Ukuba umnyango kunye nefestile amashishini afuna ukwenza umsebenzi olungileyo kuguqulelo ...
Iglasi yokhuseleko iba yindawo entsha eqaqambileyo kumnyango oqinileyo womthi
Ikhitshi okanye indlu yangasese olu hlobo lwesithuba luncinci, isibane yindawo ehlwempuzekileyo, ihlala ikhetha ucango icebisa ukuba ukhethe ucango oluqinileyo lweglasi, ukuze kuqinisekiswe ukukhanya kwangaphakathi, kodwa kukonyuse nokubonakala komthi oqinileyo ucango. Kodwa yile glasi encinci nayo canno ...